Olee Otú I Kwesịrị Isi Ree Online | Martech Zone
Etu I Kwesịrị Isi Ree Online
Mọnde, Jenụwarị 14, 2013 Thursday, June 18, 2015 Andrew Davis dee
Họrọ ebe ị ga-ere ihe gị n'ịntanetị nwere ike ịdị ka ịzụ ụgbọ ala mbụ gị. Ihe ị họọrọ dabere n’ihe ị na-achọ, ndepụta nke nhọrọ ndị ahụ ga-akarị akarị. Ebe nrụọrụ ecommerce nke obodo na-enye ohere ịbanye na netwọkụ nke ndị ahịa ma ha na-ewepụkarị uru. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ire ngwa ngwa ma ghara ichegbu onwe gị maka oke, ha nwere ike ịbụ ụzọ kacha mma.
Saịtị Ecommerce na-esote, na-enye site na igbe software dị ka nyiwe ọrụ nke nwere ụfọdụ njikọta siri ike - ọtụtụ na-akwụ ụgwọ site na ịpị njikọta na email ahịa. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchịkwa ọsọ, mgbanwe na ịhazi ahazi, ịnabata saịtị ecommerce gị nwere ike ịbụ azịza ya. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iwulite nke gị, ị bụ mkpụrụ akụ.
Nke a bụ ihe ọmụma na-atọ ọchị ma na-atọ ọchị nke na-enyocha ụzọ dị iche iche nke ire ere na saịtị dị ugbu a n'ịntanetị.
Isi Iyi:Blọgụ atụmatụ CPC
Tags: ecommercena-ere n'Ịntanet
Andrew Davis dee
Andrew bụ onye isi ahịa ahịa CPC Strategy. Na ngwụcha Septemba 2010, Andrew dechara akwụkwọ azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa mbụ nke na-enye nkọwa zuru oke banyere etu esi amalite ma jikwaa mgbasa ozi ịzụ ahịa dị irè. Taa, Andrew na-etinye oge ka ukwuu oge ya na-ajụ ndị ahịa na ndị na-ere ahịa ọnlaịnụ ọnlaịnụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịntanetị ihe, na-ede ma na-eduzi ndị Blọgụ atụmatụ CPC.
Tinye akara ngosi Home na NchNhr Navigation WordPress
Jan 15, 2013 na 7: 59 AM
Olee otú ị ga-esi Agbaghara “Olx” a infographic: /
Jan 15, 2013 na 9: 58 AM
Ejiri m oge ụfọdụ site na eserese eserese nke ihe omuma a. Achọpụtara m na ọ na-atọ ọchị na, n'eziokwu, na ntụpọ - n'ezie. Onye kere ihe omuma a nwere ihe omuma banyere otu esi ere ihe na ntaneti.